‘Manao ny Asany Mifanaraka amin’ny lalàna’ ireo Mpifehy Raha Nanivana ny Fampiharana Fandefasan-kafatra Nandritra ny Androm-pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2017 5:28 GMT
Biraom-pifidianana ao Montenegro. Sary avy amin'ny Foiben'ny Tetezamita Demokratika, nahazoana alalana.
Roa volana taorian'ny fifidianana parlemantera tao Montenegro, nilaza ireo mpifehy ara-panjakana ao amin'ny Sampana misahana ny Servisim-Pifandraisana Elektronika sy ny Paositra fa niasa ara-dalàna izy ireo raha nanakatona ny fidirana amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra finday roa malaza tamin'ny Androm-pifidianana.
Nandritra izany, nilaza ireo mpanohitra ara-politika sy ireo mpikambana malaza ao amin'ny fiarahamonina sivily ao amin'ny firenena fa nandrahona ny fahalalahana miteny tao Montenegro tamin'ny fotoana tena nilaina izany ny fangejan'ny governemanta ny media sosialy.
Inona no nitranga tamin'ny Androm-pifidianana
Tamin'ny 16 Oktobra (Androm-pifidianana), nanombe baiko ho an'ireo mpandraharahan'ny lahatahiry am-pinday rehetra ny mpifehim-panjakana ao Montengro mba hanakana ny fidirana amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza Viber sy WhatsApp. Notapahan'ny manampahefana ny fampiharana nandritra ny ora maromaro, nilaza fa olana “hafatra mpanelingelina” nalefa tany amin'ireo tambajotra no anton'izany.
Manana fahefana ofisialy hanome baiko ny fifandraisandavitra mba hampiato ny fifandraisana aterineto sy finday ny governemanta raha hitan'ny fanjakana fa “voamarina” izany noho ny fisian'ny “hosoka sy fanararaotana”, manome vahana ho an'ireo mpifehy izany hitsabahana.
Amin'ny fanantenana hanakana izay famoretana manaraka tsy amin'ny antony ataon'ny governemanta Montenegrey, niantso ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana ao amin'ny firenena ny Fikambanana Tsy Miankina Hetsika ho an'ny Zon'olombelona, mangataka aminy mba handinika indray raha manaraka ny lalàmpanorenena tokoa ny ” andinin-dalàna mampiadi-hevitra” izay namela ireo mpifehy handamina ny fanakatonana ny media sosialy mandritra ny Androm-pifidianana.
Ity fahefan'ny Sampana ity dia faritana fa malalaka loatra ary tsy ampy fanarahamaso ara-pitsarana, mifanohitra amin'ny fenitry ny fahalalahana miteny araka ny Lalàmpanorenena ao Montenegro sy ny dina iraisampirenena momba ny zon'olombelona,” hoy ireo mpikatroky ny zon'olombelona tao amin'ny tranonkalany.
Nilaza ampahibemaso i Vuk Brajović, solontenan'ny Viber (izay araka ny filazan'ny orinasa, izay maherin'ny 90% amin'ireo mpiserasera amin'ny smartfinday no mampiasa azy ao Montenegro), fa noho ny “tsy fetezan'ny lalàna sy ny teknolojiam-pifandraisana maoderina miaraka” no anton'ity “krizy” ity.
Manana mpiserasera roa arivo ny fantsona Viber momba ny fifidianana ao Montenegro sy ny faritra CEE tantanin'ny CDT.
“Nampiharina tsy misy fepetra na fitsipika izay fanao mahazatra amin'ny toe-javatra tahaka izao ny fanapahan-kevitra ofisialy hanakatona ny fifandraisana amin'ny Viber, na dia sokajiana ho toy ny manakana ny fiantraikan'ny hafatra mpanelingelina aza, hoy i Brajović tamin'ny fanambarana taorian'ny fifidianana
Tsapa manokana tao amin'ny Foiben'ny Tetezamita Demokratika (CDT), vondrona tsy miankina mpanara-maso ny fifidianana ao Montenegro ny “krizin'ny” Androm-pifidianana. (Fanamarihan'ny mpanoratra: ny mpanoratra ity lahatsoratra ity dia mpikambana ao amin'ny CDT). Tamin'ny fifidianana, nikarakara karajia misokatra ho an'ny daholobe tao amin'ny Viber ny vondrona, izay nampahafantarany tamin'ny mpamaky ireo fiampangana tsy fetezan'ny fifidianana sy ny voka-pifidianana mampiahiahy.
“Noho ireo mpanjohy anay ao amin'ny Twitter sy Facebook izay nizara vaovao nivoaka, niezaka izahay nampahafantatra ny olom-pirenena tamin'ny fomba marina sy tsy mitanila nandritra ny Androm-pfidianana. Na izany aza, mihevitra izahay fa tsy maintsy ovaina mba hifanaraka amin'ny teknolojiam-baovao ny lalànam-pirenena,” hoy ny mpitondratenin'ny CDT tamin'ny Global Voices.
Mijery izao tontolo izao
Niatrika tsikera avy any ivelany ihany koa ireo manampahefana Montenegrey. Nilaza, ohatra, ny Reporters Sans Frontières fa ny tsy fahafahana niditra tamin'ny haino aman-jery sosialy tamin'ny androm-pifidianana dia famelezana ny fahalalaham-pitenenana izay manohintohina ny fitokisana ireo andrim-panjakana demokratika, fandrisihana ny vahoaka mba hiahiahy fa miezaka ny hamily lalana ny voka-pifidianana ny governemanta. Namoaka tatitra momba ny latsa-bato tao Montenegro ihany koa ireo mpanaramaso avy amin'ny Fiarovana sy Fiaraha-Miasa ao Eoropa, maneho ahiahy amin'ny maha ara-drariny ny fifidianana.
Hatramin'izao, tsy mety mankatoa ny voka-pifidianana ny mpanohitra ara-politika ao amin'ny firenena, satria amin'ny ampahany, mety nampisy fiantraikany tamin'ny latsa-bato ny fangejana ny Viber sy ny WhatsApp. Saingy kosa, nanapa-kevitra hanao ankivy ny parlemanta ny mpanohitra.
Azo jerena amin'ny sarintany miaina ato ny voka-pifidianana farany tao Montenegro.